ताजा अपडेट- बारा र पर्सामा मात्रै मृत्यु हुनेको संख्या ३५ पुग्यो, ५ सय बढी घाइते, उद्दार कार्य जारी — Sanchar Kendra
१विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरु प्रदेश प्रमुखको निवास अगाडि धर्नामा
२मौसमसम्बन्धि आयो यस्तो ताजा अपडेट, यी स्थानहरुमा हुनेछ भारी वर्षा
३थप ३३८४ जनामा संक्रमण पुष्टि, ६१ जनाको मृत्यु
४घुसको आठ लाख रूपैयाँ फालेर भागेका गाउँपालिका अध्यक्ष घर फर्के, फूलमालाले भव्य स्वागत
५वनभोज खान गएको सरकारी कार दुर्घटना, एक जनाको मृत्यु
६वैद्यले भने- बढी बोलेछु, आत्मालोचना गर्छु
७ओलीलाई ह’त्या गर्ने ध’म्की अएपछि एमालेले के भन्यो ?
८आफ्नै पार्टीका संसदले प्रधानमन्त्रीलाई ज्यान मा’र्ने ध’म्की दिएपछि कांग्रेसले मुख खोल्यो, विज्ञप्तिसहित
९ज्ञानेन्द्र शाहीको समूहमाथि सुर्खेतमा आ’क्रमण, कति जना छन् घाइते ? हेर्नुहोस भिडियोसहित
१०प्रधानमन्त्री ओलीलाई कसले दियो ह’त्या गर्ने धम्की ?
११राउटे युवतीमाथि भएको यौ’न दु’र्व्यवहारको भिडियो प्रसारण गर्ने साइट बन्द हुने, अदालतले दियो यस्तो आदेश
१२नेपालको पूर्वी भेगबाट भित्रियो मनसुन, यस्तो छ आगामी ३ दिनको मौसम पूर्वानुमान
ताजा अपडेट- बारा र पर्सामा मात्रै मृत्यु हुनेको संख्या ३५ पुग्यो, ५ सय बढी घाइते, उद्दार कार्य जारी
विरगन्ज । आइतबार साँझ एक्कासी आएको हावाहुरीले र बारा र पर्सामा ३५ जनाको ज्यान गएको स्थानीयवासीले बताएका छन् । तर प्रहरीले भने अहिलेसम्म ३१ जनाको मात्रै शब भेटिएको पुष्टि गरेको छ । ६ सयभन्दा बढी घाइतेको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
आँधीका कारण घरमा रुख ढलेको र घर भत्किँदा पुरिएएर त्यति धेरै जनाको ज्यान गएको भन्दै यकिन तथ्यांक अझै प्राप्त नभएको २ नम्बर प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी हरिबहादुर पालले जानकारी दिए ।
मृत्यु हुनेको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । आँधीमा परेर दर्जनौ घर भत्केका छन् भने ६ सयभन्दा मानिस घाईते भएको जनाइएको छ । प्रहरीले उद्दार कार्य जारी राखेको छ ।
वीरगञ्जमा आइतबार साँझ आएको हावाहुरीका कारण ५ जनाको मृत्यु भएको छ भने ८० भन्दा बढी घाइते भएका छन् । पर्सा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरिक्षक राजेश दत्तका अनुसार नेसनल मेडिकल कलेजमा दुई जना, वीरगञ्ज हेल्थ केयरमा एक जना तथा नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा दुई जनाको शव आइपुगेको हो ।
त्यस्तै, अर्को एउटा शव फेला परेको पनि प्रहरी निरिक्षक दत्तले जानकारी दिए । मृत्तकहरुको पहिचान खुल्न सकेको छैन । मृत्तक मध्ये वीरगञ्ज हेल्थ केयरमा एक जना ६ वर्षीय बालकको शव रहेको दत्तले जानकारी दिए ।
आइतबार साँझ करीब आठ बजे वीरगञ्जमा हावाहुरी आएको थियो । हावाहुरीका कारण विजुलीका खम्बा तथा रुखहरु ढल्नुका साथै गुडिरहेका ३ दर्जन गाडी पल्टिनुका साथै क्षति पुगेको थियो । घाइतेहरुको नेसनल मेडिकल कलेज, नारायणी अस्पताल, वीरगञ्ज हेल्थ केयर र गण्डक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
हुरीका कारण आपत्मा परेकाहरुको उद्धारमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा स्थानीयवासी खटिएको प्रहरीले जनाएको छ । यसैबीच आइतबार साँझ आएको आँधी हुरीबाट प्रदेश २ का जिल्लामा भएको जनधनको क्षतिप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुःख प्रकट गरेका छन्। साँझ आएको आँधी हुरीमा जनधनको क्षति भएको जानकारी आएको छ।
प्रधानमन्त्रीले भने बारा र पर्सामा गरी २५ को मृत्यु भएको र ४०० भन्दा बढी घाइते भएको जनाएका छन्। प्रधानमन्त्रीले ती जिल्लामा उद्दारका लागि सुरक्षाकर्मीहरू परिचालित भइसकेको जनाएका छन्। ‘उद्दारमा गम्भीर हुन र घाइतेको उपचारमा कुनै कमी आउन नदिन निर्देशित गरिएको’ उनले ट्वीटमा जनाएका छन्।